Iindlela ezi-5 zokuHambelanisa ukuThengisa kunye nokuThengisa ukuze kunyuswe iNgeniso | Martech Zone
Iindlela ezi-5 zokuHambelanisa ukuThengisa kunye nokuThengisa kwiNyuso yeNgeniso
NgoLwesithathu, Julayi 22, 2015 NgoLwesibini, Julayi 21, 2015 Douglas Karr
Qho xa sithatha umthengi, inyathelo lokuqala esilithathayo kukuba ngumthengi. Asiyi kubiza ngokukhawuleza iqela labo lokuthengisa. Siza kubhalisela i-imeyile yeendaba (ukuba banayo), khuphela i-asethi, ishedyuli yedemo, kwaye ulinde iqela lokuthengisa ukuba lifikelele kuthi. Siza kuxoxa ngeli thuba ngokungathi besikhokela, kwaye sizame ukuwenza wonke umjikelo wentengiso kunye nabo.
Inyathelo elilandelayo esilithathayo kukubuza iqela lezentengiso ukuba ujonga njani umjikelo wentengiso. Siphonononga isibambiso sentengiso esiphuhliswe yintengiso. Kwaye emva koko sithelekisa ezi zimbini. Uyakothuka, umzekelo, mangaphi amaxesha apho sibona intengiso enophawu lwentengiso eyilelweyo kwiqela lezentengiso… kodwa emva koko kuboniswe intetho eyoyikekayo yokuthengisa ejongeka ngokungathi yenziwe ngokungxama imizuzu eli-10 phambi komnxeba. Ngoba? Ngenxa yokuba intengiso enye yenzelwe nje ayisebenzi.
Le nkqubo ayisiyonkcitho yexesha- phantse ihlala inika umsantsa phakathi kwala maqela mabini. Unokuba unqwenela ukubona inkqubo yakho. Asikuthethi oku ukuba ukuthengisa kunye nentengiso ayisebenzi, amaxesha amaninzi ukuba iqela ngalinye lineendlela ezahlukeneyo zokukhuthaza. Ingxaki xa kusenzeka ezi zikhewu ayikuko ukuba ukuthengisa kukuchitha ixesha… kukuba iqela elithengisayo alikhulisi izixhobo zalo zokondla nokuvala intengiso.
Sakhe sapapasha imibuzo ngaphambili onokuyibuza ngaphakathi kombutho wakho ukuba jonga ulungelelwaniso lwakho lokuthengisa kunye nentengiso. UBrian Downard, uMseki-ntsebenziswano kunye neQabane kwi-ELIV8 Strategies zoShishino uzidibanisile ezi Iindlela ezi-5 zokuphucula ukuthengisa kunye nentengiso yakho… Ngeenjongo zokudibanisa ingeniso.
Umxholo kufuneka uqhube ukuthengisa, hayi nje ulwazi lwebrand -Bandakanya iqela lakho lokuthengisa kwisicwangciso sakho somxholo wokuchonga amathuba kunye neenkcaso ezithi zive iqela lakho lokuthengisa.
Isicwangciso sokondla uluhlu lwakho olukhokelayo -Entengiso iyakhuthazeka ukufumana intengiso ekhawulezileyo, ke banokuyeka iindlela zokuthengisa ezinengeniso ezinokuthi zithathe ixesha elide.
Chaza intengiso efanelekileyo efanelekileyo yokuthengisa (SQL) -Intengiso ihlala iphosa lonke ubhaliso njengenkokeli, kodwa ukuthengisa kwi-Intanethi kuhlala kuvelisa uninzi lwezinto ezingafezekanga.
Yenza isiVumelwano seNqanaba leNkonzo phakathi kwentengiso kunye nentengiso - isebe lakho lentengiso kufuneka liphathe iqela lakho lokuthengisa njengabathengi babo, nokuba kuvavanywa indlela abakhonza ngayo ukuthengisa.
Hlaziya i-pitch yakho yentengiso kunye nenkcazo-ntetho - utyalomali kwinkqubo yokulawulwa kwempahla yokuthengisa eqinisekisa ukuba izinto zentengiso zamva nje ziyavavanywa kwaye zilinganiswe.
Kukho izinto ezongezelelweyo onokuzenza ukunceda ukulungelelanisa ukuthengisa kunye nentengiso. Ukwabelana ngeZalathi zeNtsebenzo eziPhambili (ii-KPIs) ezinje ngamathuba avelisiweyo kwaye avaliweyo / aphumeleleyo kwishishini ngokuthengisa kwabo ngokufanelekileyo kunye neendawo zokuthengisa ezinokunceda ekuboneni ezona zicwangciso ziqhuba kakuhle. Unokuba unqwenela ukupapasha ideshibhodi ekwabelwana ngayo ukulandela inkqubela phambili kunye nokuwonga amaqela xa iinjongo zifezekisiwe.
Kwaye uhlala uqinisekisa ukuba ubunkokheli bokuThengisa kunye neNtengiso banombono ekwabelwana ngawo kwaye batyikitye kwisicwangciso somnye nomnye. Ezinye iinkampani zibandakanya iGosa eliyiNtloko leNgeniso ukuqinisekisa ulungelelwaniso.
tags: ulungelelanisoUkuThengiswa kweMpahlaurhweboizikhokelo ezifanelekileyoIngenisoUkunika amandla ukuthengisaintengiso yentengisoulungelelwaniso lwentengisoukuthengisa okufanelekileyo
Awuthathi siNcedo kwiNdawo yeNtengiso yeHlabathi
Uvavanyo lweMarcom: Enye indlela yokuvavanywa kwe-A / B